Mophie Powestation Hub wuxuu noo ogolaanayaa inaan afar qalab wada qaadno | Wararka IPhone
Markaad safar galeyso, mid ka mid ah dhibaatooyinka aan la kulanno waa tirada fiilooyinka iyo xeedho ay tahay inaan qaadno, haddii ay ahaan laheyd kombuyuutarka, iPhone, iPad, kaamiradda ... helitaanka in ka badan hal marin ayaa noqda hawl adag.
Si loo isku dayo in loo xaliyo dhibaatadan, ragga Mophie waxay soo bandhigeen Hub xoog leh, batari dib loo soo celin karo oo noo ogolaanaya inaan isku xirno ilaa 3 aaladood oo wada jir ah iyada oo loo marayo fiilo sidoo kale leh 5W lacag bixin wireless ah. Hoos waxaan ku tusaynaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan badeecadan cusub.
Mophie Powerstation Hub wuxuu leeyahay fiilo ku lifaaqan oo aan ku c kar kar karno cku xir shabakada korantada inta aan isticmaaleyno marka ay lacag bixinayso. Waxay awood u leedahay 6.100 mAh waxayna na siineysaa wax badan oo illaa iyo hadda aanan ka heli karin suuqa, ugu yaraan tayada iyo badbaadada ay soo saaraha soo saaraha noocaan ah noo soo bandhigo.
Marka laga hadlayo dekedaha isku xirka, Xarunta loo yaqaan 'Mophie powerstation Hub' waxay na siisaa deked 5w USB-A, hal 15w USB-A dekedda lacag bixinta oo deg deg ah, iyo hal xiriir 18w USB-C ah. Isla dekeddan ayaa loo isticmaali karaa in lagu soo dallaco dhidibbada, in kasta oo ay ku habboon tahay in laga faa'iideysto nidaamka lacag-bixinta degdegga ah ee ay bixiso iPhone-ka.
Saldhiggan lacag-bixinta maahan mid ku habboon oo keliya marka aan hoteelka ku jirno oo waa inaan lacag ka qaadno qalabkeenna habeenkii, laakiin sidoo kale waxay ku habboon tahay markii aan safreyno, garoonka diyaaradaha ama saldhigga nasashada, iyadoo ay ugu wacan tahay suurtagalnimada inaan noqonno awoodo ku soo dallaca ilaa afar aalad oo isku god ah.
Qalabka Mophie ee budada ah waxaa lagu qiimeeyaa $ 99,95, wuxuu leeyahay miisaan dhan 255 garaam iyo cabirkiisuna yahay 84 x 84 x 29,5 mm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Mophie Powestation Hub wuxuu noo ogolaanayaa inaan wada qaadno afar qalab
Patent-ka Apple wuxuu muujiyaa kamarad loogu talagalay suunka Apple Watch
Bogagga, Lambarada iyo Muhiimadda waa la cusbooneysiiyay hagaajinta isdhexgalka Apple Pencil iyo wax badan oo dheeri ah